Televiziona Kazakhstan: Fanjakana mpanao heloka bevava sy mpanao kolikoly i Alemana, tantanin'ny jiolahy sy mpamono olona.
Nikolai Erney, mpikatroka mafàna fo mpiaro ny zon'olombelona, izay miresaka momba ny fanitsakitsahan'i Alemana ny Fifanarahana momba ny zon'ny zaza, ny fifanarahana momba ny zon'olombelona, ny fifanarahana Lisbonna nananganana ny Vondrona eropeana, ny fomba fihetsika tsy ara-dalàna nataon'ny Komisiona eropeana momba izany, momba ny kolikoly amin'ny fitarihana ny governemanta alemanina, ny kolikoly eo amin'ny fitarihan'ny Antenimieram-pirenena. Alemanina, ny asa fisaratsarahana, ny aretin-tsaina manasazy, ny mpitsara sandoka tsy misy fianianana, ny didim-pitsarana tsy misy sonia, ny kapoka ny ankizy any an-tsekoly, ny fanafihan'ny mpitsoa-ponenana ny zaza alemanina, ny fanakendana ny ankizy any am-pianarana, ny fihetsika manapaka lohany any an-tsekoly
Salama, izaho Lilia Iglikova. Manohy miresaka momba ny volavolan-dalàna mifehy ny ady amin'ny herisetra an-tokantrano ao amin'ny fianakaviana izahay. Mifandray amin'i Skype avy any Moskoa izahay, mpikatroka sivily, mpiaro ny zon'olombelona - Nikolai Erney. Nikolay, hello.
Ny filan-dalàna manodidina ny volavolan-dalàna amin'ny ady amin'ny herisetra an-tokantrano ao amin'ny fianakaviana dia tonga amin'ny sehatra ao Kazakhstan rehefa azo atao malalaka ny manapa-kevitra momba ny fitsipika tokony harahina amin'ny fiarovana ny fianakaviana sy ny ankizy. Ny fironana hampiasa maodely tandrefana amin'ny lalàna, raha ny fahazoako azy dia mahazo vahana ihany eto amin'ny firenentsika, noho izany tiako ny hahita ny fandehan'ny raharaha any Andrefana.
Fantatray fa efa nipetraka tany Alemana nandritra ny taona maro ianao ary niatrika an'io olana io, koa tiako hohenoina ny fomba fijerinao ny toe-javatra.
Raha ny tena izy dia samy maka tahaka ny maodely tandrefana amin'ity fanoherana ny herisetra mianjady amin'ny fianakaviana ity i Russia sy Kazakhstan, izany hoe, mandray lalàna izy ireo, amin'ny fomba iray ka hatramin'ny iray, ny lalàna momba ny fitsarana zaza tsy ampy taona, izany hoe, io dia andiam-pitsipika, andiam-pitsipika heverina fa hiarovana ny ankizy ary heverina fa mba hiarovana ny zon'ny ankizy, ary raisin'izy ireo izany, dia adikan'izy ireo tsotra izao ity lalàna ity ary alainy tsirairay.
Ary inona no vokatr'izany? Ahoana ny fahitany azy any Alemana, ny fomba fiasa any Alemana. Ny zaza iray ohatra, teraka ny zaza iray, raha tsy tian'ny fianakaviana ny serivisy ara-tsosialy noho ny antony sasany dia azo alaina eny amin'ny hopitaly izy. Izany hoe, ara-bakiteny eo avy hatrany aorian'ny nahaterahany.
Avy hatrany aorian'ny fahaterahana, izany hoe tsy afaka iray andro, amin'ny roa, tsy amin'ny dimy andro. Ankizy avy amin'ny fianakaviana voasoratra anarana dia entina mivantana any amin'ny hopitaly. Ny fianakaviana iray dia afaka misoratra anarana raha manana izany izy taloha .. Raha ohatra, ny zazavavy dia nihalehibe tany amin'ny trano fitaizana zaza kamboty, na ny bandy iray nihalehibe tany amin'ny trano fitaizana zaza kamboty, ny fianakaviana toy izany dia efa voasoratra ara-dalàna, dia efa heverina ho tsy azo atokisana sy tsy miasa izy ireo. Efa afaka esorina amin'izy ireo izy ireo.
Ny asa aman-draharaha, rehefa mijery ny fomba fiasan'izy rehetra ianao dia takatrao fa raharaham-barotra tena ahazoana tombony ho an'ny tompon'andraikitra sasany io. Satria, ohatra, fianakaviana tsotra ..
Mba hanesorana ny zaza amin'ny ankohonany dia tsy maintsy mbola misy ny fambara amin'ny fitsarana zaza tsy ampy taona, araka ny fahazoako azy?
Tsia, ny famantarana dia tsy voatery avy amin'ny fianakaviana. Ny famantarana dia mety avy amin'ny akanin-jaza, ny famantarana dia mety avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina fa manitsaka ny tongony amin'ny tany ny zaza, mandeha fotsiny amin'ny tany, tsy tian'ny mpiara-monina izany, afaka mitaraina izy ireo ary tonga amin'ny pensilihazo ny fianakaviana. Arak'izany, voatendry ny fanaraha-maso, tonga any amin'ny trano ny tompon'andraikitra mpiambina ary manomboka manome toky ny ray aman-dreny fa milamina ny zava-drehetra, amin'izao fotoana izao dia mirakitra an-tsoratra izay rehetra tsy tiany izy ireo.
Izany hoe, ohatra, ny reny mampinono zaza. Mety tsy tian'ny mpiasan'ny fikarakarana izany. Mila mamahana tavoahangy. Nifandray akaiky tamin'ilay zaza i Neny. Ny zaza, ohatra, ny zaza kely, matory eo akaikin'ny reniny, tsy ekena izany. Ankehitriny miaraka amin'ny areti-mifindra coronavirus, ny fepetra takiana dia raha avy amin'ny akanin-jaza na sekoly ny zaza iray, na ampidirina ao amin'ny akanin-jaza na sekoly ny quarantine, dia tsy maintsy mipetraka irery mandritra ny roa herinandro ny zaza ao anaty efitrano iray, voarara tsy hifandray amin'ny ray aman-dreniny izy.
Hitanareo, inona ny adin-tsaina mahazo ny zaza, fa irery izy ao amin'ny efitrano, tsy misy afaka milalao aminy, dia mihidy tsotra izao izy. Ireo fanavaozana rehetra ireo, eto amintsika, mitarika ny toe-java-misy amin'ny ankizy izy ireo, miharatsy hatrany hatrany. Ohatra, tao anatin'ny roa volana lasa izay, ny zaza alemanina dia nanisy hatsiaka be ny zaza any an-tsekoly. Izany hoe, manana kilasy manomboka ny faran'ny volana aogositra izy ireo, daty samihafa ho an'ny faritra, manisa septambra - oktobra dia nanokatra varavarankely izy ireo, nisokatra ny varavarana, nipetraka tamina volavolan-dalàna ny ankizy rehetra, izany hoe, tonga tao am-pianarana daholo izy ireo. nody an-trano, tsy afaka mitazona penina izy ireo, na inona na inona. Mazava ho azy fa nanana valanaretina gripa izy ireo, valanaretina SARS, valanaretina otitis media, fivontosan'ny sofina afovoany, saingy heverina ho ara-dalàna amin'ny Alemanina izany, satria amin'io fomba io dia manazatra ankizy marobe izy ireo, toy ny fivavahana toy izany, izany hoe, mila avela hampangatsiaka ny ankizy mba hananany fiofanana. ... Vokatr'izany, ara-bakiteny, raha mandeha amin'ny arabe ianao, isaky ny 50 metatra dia mahita atrikasa mivarotra implants ho an'ny sofina ianao ary tafiditra amin'ny fisafidianana implants ho an'ny sofina. Izany hoe, rehefa mijery izany rehetra izany ianao dia mipetraka ny fanontaniana, ampy ve ny olona amin'ny ankapobeny? Ny tenanao dia feno fonosina tanteraka, ary ny zanakao miaraka amin'ny tongotra sy lohany misokatra no mizotra amin'ny arabe.
Ahoana, raha mandà ny handeha any an-tsekoly ny zaza amin'ny toe-javatra toy izany, dia marary fotsiny izy na zavatra hafa, arak'izany, ny ray aman-dreny dia miandry famaizana lehibe. Didy 1000 euro noho ny tsy fisehony any am-pianarana. 1000 euro isan'andro. Raha tsy mandeha any am-pianarana matetika ny zaza, izany hoe mandritra ny herinandro na mihoatra, dia voasoratra ho azy avy amin'ny fahefana mpiambina ny fianakaviana ary avy eo dia azo alaina an-tsekoly fotsiny ilay zaza, taloha, raha misy izany, raha misy ny fifanolanana ao amin'ny akanin-jaza, dia azo nalaina avy tao amin'ny akanin-jaza izy ireo. Ary nesorina izy, napetraka tao amin'ny fianakaviana mitaiza avy hatrany. Ary hatramin'ny fotoana nisamborana azy dia tsy manana fe-potoana voafetra ny Alemanina, tsy adidiny ny mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny 24 ora, toa an'i Russia, te-hamoaka lalàna ao anatin'ny 24 ora izy ireo mba handraisan'ny fitsarana fanapahan-kevitra, na i Kazakhstan dia te-handray lalàna ao anatin'ny 24 ora ka hanapa-kevitra ny fitsarana. Tsia, tsy misy fehezan-teny toy izany any aoriana.
Avy eo dia hanana fe-potoana tokana ianao, fa raha mampiasa ity lalàna ity amin'ny endriny rehetra mety hahatafiditra ny ankizy amin'ny fanapahan-kevitry ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ara-pitantanana ianao dia tsy hanana afa-tsy fe-potoana iray - 18 taona. Tsy 18 akory, fa 23 taona. Izany hoe, ny fitandremana dia voatahiry amin'ny zaza toy izany mandra-pahatongan'ny 23 taona, ary amin'ny 23, raha mbola hitany hoe iza ny reniny sy ny dadany dia mety mody any an-trano izy ireo na mahita azy ireo. Saingy tsy te-hahita azy ireo izy, mandritra ny taona maro dia hazavaina aminy malaza fa marary ny renim-pianakaviana sy ny reniny, mampidi-doza i Neny sy i Dada, ankehitriny dia manana ray aman-dreny vaovao izy, tsara ampidirina fanafody, pilina, hanazava azy aminy, ny zava-mitranga rehetra dia milamina ny zava-drehetra, izany hoe hanana fanodinana fahatsiarovan-tena be loatra izy ka hankahala an'i dada-dadany avy eo. Misy ohatra ny ankizy izay tena misy fitsaboana matotra be. Manao ahoana ny fahitan'ny Alemanina, eto no nesorina ilay zaza, taitra ny reny sy ny dadany, ny zaza tsy avy tany an-tsekoly na akanin-jaza, na niantso avy any amin'ny akanin-jaza fa nalainy izany.
Mihazakazaka manatona mpisolovava izy ireo. Any Alemana dia tsy afaka mametraka fitoriana ianao raha tsy misy mpisolovava, eto ihany ny tranga kely azo vahana raha tsy misy mpisolovava. Ary miaraka amin'ny mpisolovava hatrany ny tranga toy izany. Avy hatrany, ny vidiny dia manomboka amin'ny 20000 euro, 50000 euro, ary ny orinasa fiantohana dia tsy mandray an-tanana izany fitakiana izany. Izany hoe manomboka mandoa mpisolovava ny ray aman-dreny ary misy ny mpisolovava any Alemana. Mpisolovava iray any Alemana dia ao anatin'ny fitsarana hatrany. Toy ny tanana ankavanan'ny mpitsara izy. Ny lalàna no anaovany fianianana tahaka ny mpitsara. Ny mpisolovava iray any Alemana ihany koa dia manana ny maha-mpisolovava azy raha toa ka ao amin'ny fikambanan'ny mpisolovava izy. Izany hoe, raha tena tsara fitondran-tena ny olona iray, dia mahalala tsara ny lalàna, saingy noho ny antony sasany dia nifanditra tamin'ny mpitsara izy, niaro ny zon'ny mpanjifa, avy eo, rehefa niantso ny mpitsara, dia noroahina hiala ny mpiara-miasa aminy izy, noroahina tsy ho ao amin'ny biraony. aorian'izany ny olona iray, lasa voatavo ny satan'ny ara-dalàna, tsy tonga mpisolovava intsony izy.
Tsy afaka manao zavatra hafa izy. Na dia lasa mpisolovava an'ny kolezy vahiny aza izy, dia lasa mpisolovava an'ny kolezy vahiny, izy koa, ao amin'ny fitsarana alemanina dia tsy afaka manoratra taratasy iray, mandefa antontan-taratasy na aiza na aiza. Inona no vokany? Mihazakazaka manatona mpisolovava ny olona, mandoa vola, nilaza ilay mpisolovava fa eny milamina ny zava-drehetra, izao dia hametraka fitoriana amin'ny fitsarana izahay, hametraka fitoriana any amin'ny fitsarana izy, ary handahatra fitsarana amin'ny enim-bolana ny fitsarana. Na mandamina fivoriana mandritra ny 3 volana izy. Mandritra ny telo volana eo am-pandinihana ilay zaza. Azonao ve? Eto amin'ity fianakaviana mitaiza ity. Manomboka avy hatrany ny fizarana ho an'ity fianakaviana mitaiza ity, manokana vola any ny fanjakana amin'ny faritra enina ka hatramin'ny valo arivo euro isam-bolana. Diniho, 8000 Euros isam-bolana dia 100 000 euro isan-taona. Ireo faktiora ireo dia alefa any amin'ny ray aman-dreny avy eo. Izany hoe ny fanjakana aloha dia mandoa ity vola ity amin'ny fianakaviana mitaiza, ary avy eo mandefa ireo faktiora ireo amin'ny ray aman-dreny ary manapotika ny fianakaviana toy ny ara-nofo fotsiny. Satria terena handoa mpisolovava ny fianakaviana dia ao anaty adin-tsaina ny fianakaviana, tsy afaka miasa intsony ny fianakaviana.
Nisy tranga rehefa nesorina tamina fianakaviana mahafinaritra iray ny zaza fito, nisy tantara iray momba izany. Ny antony nisamborana ireo ankizy dia ny fitafian'ny ankizy akanjo tsy mitovy taona aminy, ary reraka be ilay renim-pianakaviana hany ka hitan'ny ankizy sy ny manam-pahefana mpiambina izany.
Mipetraka ny fanontaniana, azafady ho an'ny ankizy 7 8000 Euros, isa 50-60000 isam-bolana io, efa ho fito hetsy ariary isan-taona, izany hoe, fianakaviana toy izany, manan-janaka tsara, zaza salama, toa ny fitondran-tena tsara - lasa matsiro ireto fianakaviana ireto sombin-javatra iray, mihazazaza tokoa izy ireo. Ary fianakavian'ny vahiny ireo. Satria vahiny, ireo no Kazakhs izay nifindra ho Alemanina Kazakh, fianakaviana toy izany. Alemanina rosiana izay nifindra toerana. Ny vahiny rehetra tonga niasa satria tsy manana fifandraisana amin'ireo mpampanoa lalàna sy mpitsara afaka manampy azy ireo amin'izany, amin'ny famahana ity olana ity.
Ny lalàna amin'ny telefaona any Alemana dia mandeha tsara.
Okay, Nikolay, ary milaza ianao fa manafaka izany, hitako amin'ity toe-javatra ity ny tombotsoan'ny mpisolovava, mpitsara, mpampanoa lalàna. Avy amin'ny tantaranao dia azoko hoe inona ny tombotsoan'ny fianakaviana nitaiza, saingy tsy azoko hoe maninona no ilain'ny fanjakana izany?
Ary ny fanjakana, takatrao fa orinasa lehibe iray i Alemana, izany hoe, raha mijery an'i Alemana isika dia mieritreritra fa fanjakana demaokratika i Alemana, izay misy ny fifidianana, misy antoko am-polony, olona mifidy olona, avy eo ireo antoko ireo misafidy ny chancellor izy ireo, mifidy ny filoham-pirenena, zavatra hafa ... Raha miresaka an'izany isika, raha mipetraka any ianao dia ho velona ara-batana ary hiatrika olana vitsivitsy ianao, na ho hitanao ny fomba niatrehan'ny olon-kafa olana, dia ho azonao ny tena atao hoe Alemanina orinasa iray tompon'andraikitra voafetra io, iray ihany ity orinasa ity.
Orinasa iray ity, orinasa iray. Ny orinasa hafa rehetra dia departemanta fotsiny amin'ity orinasa ity. Ary noho izany dia toy ny fanjakan'ny tompon'andraikitra izy io. Ny zavatra atao dia ataon'ny manampahefana mba hahafaly ny tompon'andraikitra. Rehefa azo antoka fa tsy mahasoa ny fanjakana amin'ny maha fiaraha-monina azy dia loza ho an'ny fanjakana izany. Fa mahasoa tokoa ho an'ny tompon'andraikitra, satria mahazo baiko azo antoka amin'ny asany any izy ireo, ny mpiambina mihitsy, arakaraka ny ahatongavan'ny asa, ny ankizy misambotra isan-taona.
Izany hoe raha 10 taona lasa izay dia zaza 50 000 isan-taona no nalain'izy ireo dia zaza 100 000 isan-taona no azony. Raha ny lojika, aorian'ny fakana ny 50 000 voalohany, amin'ny taona ho avy dia tokony haka iray na roa arivo izy ireo. Satria nesorina daholo ny ankizy avy amin'ny fianakaviana mampidi-doza. Tsia, vao mainka mihaona amin'ny taona ho avy izy ireo, vao mainka mihabetsaka. Izany hoe manome andraikitra ny tenany ny tompon'andraikitra. Eto ny psychiatrist dia manome asa ny tenany, miasa ny mpitsara. Ary miaraka amin'izay koa, amin'ny alàlan'ny mpanao politika, mampiroborobo ny fisondrotana avo indrindra sy ny fampitomboana ny fandaniana amin'ny teti-bola izy ireo.
Ary ny mpanao politika dia manara-maso an'io, ary amin'ny ambaratonga fitarihan'ny fanjakana Alemanina Duma, ny Bundestag. Raha mijery ny lefitra lefitra Michaela Noll - Michaela Marion Noll (née Tadjadod) isika dia i Bundestag, ny filoha alemà, lefitra. Ny filohan'ny Bundestag, izany hoe, sary maro izay nihaonany tamin'i Wolfgang Schwachula - Wolfgang Schwachula, Wolfgang Schwachula no lohan'ny Fikambanan'ny Alemanina Momba ny Ankizy ho an'ny Fiarovana amin'ireo ray aman-dreny marary saina. Izany hoe, fantatrao fa ity rafitra ity dia toy ny hazo toy izany. Ary mankany an-tampon'ny tampony izy. Arak'izany, Schwachula dia manome ny vahaolana ilaina ho an'ny ray aman-dreny, manasonia azy ireo fa marary saina, mampidi-doza izy ireo. Ny mpitsara dia manome azy ireo mpanjifa ireo indray mandeha, manoratra izy ireo mba hitarika ilay olona mankany Schwachula. Ary Schwachula nihaona tamin'i Michaela Marion Noll, filoha lefitry ny fanjakana Alemanina Duma, dia tompon'andraikitra amin'ny fizarana vola. Ity rafitra iray ity dia miasa toy izany.
Ary raha tonga farafahakeliny indray mandeha ianao, fara fahakeliny, indray mandeha mikapoka ny pensilihazo, avy eo ny manampahefana Alemanina mpiambina, esoriny aminao ny zony hamaritra izay hipetrahanao miaraka amin'ny zanakao. Ary tsy afaka miala eto amin'ny firenena ianao. Misy tranga toy izany, goavana izy ireo. Nanoratra fanangonan-tsonia tany amin'ny Kaongresy amerikana ny Amerikanina, vonjeo ny zanatsika amerikana amin'ny Alemanina.
Fahitalavitra amerikana, fantsona kristiana amerikana, naka sary horonantsary, horonantsary 10 taona lasa izay, ity horonan-tsary ity dia mbola misy ifandraisany ihany, momba ny fiasan'ny orinasa misy ankizy. Ahoana ny fomba hisafidianan'izy ireo azy ireo, ny fomba fiasan'ireto trano fitaizana ireto, ny fomba fisehoan'ny dokambarotra avy amin'ny fitantanana ireo trano fitaizan-gazety ireo amin'ny gazety "mitady olona mifandray tsara amin'ny tompon'andraikitra mpiambina izahay", izany hoe, tsy menatra akory izy ireo, izany hoe fanambarana, ary ity no rafitra Jugendamt iray manontolo, biraon'ny raharahan'ny tanora izany.
Ity dia fampianarana arabo. Izy rehetra dia noforonina tamin'ny andron'i Hitler, ary nitovy fomba fiasa nanomboka teo. Natao manokana ho an'ny tanora izy io, indrindra ho an'ny ankizy avy amin'ny kilasy voalohany, eny fa na dia any amin'ny akanin-jaza aza dia manomboka, indrindra ny kilasy 1, 2, 3, hatramin'ny fikasana ati-doha. Raha avy any amin'ny kilasy 2 ny ankizy ary miteny hoe dada dada, maman tianao ve ianao raha eo ambony na any ambany, na any aoriana, dia taitra i Neny, inona izany? Ary nilaza izahay fa misy horonan-tsary mahaliana iray mampiseho ny fifandraisan'ny dadatoa sy nenito tsy mitanjaka, dia tena tsy azontsika hoe inona ... Izany hoe, amin'ny kilasy faha-2 dia efa aseho an-tsekoly izany.
Alainy lavitra ny ankizy amin'ny telefaona, maro ny ankizy manana telefaona hisorohana ny fandefasan'ny ankizy sary an-tsary azy, ka hitany izy ireo ary asehony azy ireo vetaveta fotsiny. Ary avy eo tonga tampoka ireo ankizy ao an-trano, tsy hainy akory ny milaza izay hitany. Azonao ve ity rafitra ity? Toy izao ny zava-drehetra. Mila vaky tanteraka ny zava-drehetra ka olona iray, olona kely, mody any an-trano, raha any an-trano izy dia milaza ny zava-nitranga tany an-tsekoly na tany an-jaridaina, ary hitan'ny mpampianatra momba izany dia hosazina izy. Avy eo dia tena hanasazy azy any am-pianarana izy ireo. Tokony holazainy any am-pianarana io fotoana io ..
Ny lohahevitry ny fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy amin'ny ankizy dia avoaka ankehitriny na any Kazakhstan na any Russia, fa na dia ray aman-dreny aza izahay, dia tsy azonay an-tsaina hoe inona no ho vokatr'izany amintsika.
Mazava ho azy fa ilay fonosana ihany no hitantsika. Hitanay ny fonosana, ary fantatrareo ny maha-izy azy ... Misy ny toe-javatra izay mamono zaza ny ray aman-dreny ary avy hatrany dia misy fanarian-gazety goavambe ka tsy tapitra ny fijerin'ny manampahefana mpiambina, mila fahefana bebe kokoa ny manampahefana mpiambina. Manana fahefana feno izy ireo. Tsy niraharaha izy ireo. Tsy mandray ankizy amina fianakaviana mahery setra izy ireo, izay ahafahan'ny dadany tonga ary manala ny lohan'ireo mpiambina mpiambina. Tsy raisiny amin'ny fianakaviana toy izany izy ireo. Alain'izy ireo ny ankizy amin'ny fianakaviana izay tsy hisy olana eo amin'ny fianakaviana.
Izay alehan'ny fianakaviana hanenjehana azy ireo dia tsy entin'izy ireo amin'ny fianakavian'izy ireo ny mpitsoa-ponenana. Satria izy ireo dia ho avy fotsiny manipy grenady, ary izy ireo ihany no mahatakatra ny zava-drehetra. Tsy mikasika ny fianakaviana, ankizy, akory izy ireo, na inona na inona ataony any. Avelao izy ireo hifamono.
Azonao lazaina aminay ve ny zavatra natrehinao?
Niatrika ny zava-misy izahay fa tany am-pianaranay dia nisy zazalahy Afgàna namono ankizy hafa, nodaka aloha, avy eo nokendainy ny ankizy, natosiny hidina amin'ny tohatra izy ireo, niraikitra tamin'ny fork ny vozony.
Niezaka ny nandondona ny zanakay lahy tamin'ny pensily tamin'ny masony izy nandritra ny lesona, ary nisy fotoana iray nampigadra ny sekoly ity zazalahy ity, izany hoe, voavaha vetivety ny fifandonana, avy eo navotsotr'izy ireo tamin'ny sazy sy ny fameperana izy, notafihiny ny zanakay lahy. Niezaka ny namaha ny olana tamin'ny alàlan'ny fitantanan-draharahan'ny sekoly aho, mba hahafahan'ilay zaza gadraina tsotra izao, mba hipetraka amin'ny birao isan-karazany izy ireo. Mba hisorohana an'io herisetra sy daroka io, satria hoy ny zanako tamiko "dada, nahoana isika no mipetraka eto amin'ity firenena ity mihitsy ary nahoana isika no nifindra teto amin'ity firenena ity mihitsy?"
Tamin'ny farany dia nandà tsy handeha ho any amin'ny sekoly alemanina iray manontolo ilay zanany lahy. Fanampin'izany dia nasehony ahy ity fihetsika ity, nanapaka ny lohany, nilaza izy hoe "Dada, ho faty ianao" amiko amin'ny teny alemà. Tonga tany amin'ny talen'ny sekoly aho, hoy aho, azafady, mahazatra anao ve izany amin'ny ankapobeny? Avy amin'ny boky alemà avy aiza ireo fihetsika ireo? Hoy izy amiko: avy amin'i Mickey Mouse ity. Izany hoe, nahita izany tao amin'ny Mickey Mouse ity zaza Afgana ity, ary avy eo nasehony tamin'ny olon-drehetra, nasehony tamin'ny mpampianatra fanatanjahan-tena, ary avy eo tonga tamin'ny fomba ofisialy fa tsy nisy nahita na inona na inona, tsy nisy nahalala na inona na inona, sns. Sns
Ary lasa izahay. Noheveriko fa tsy maintsy mitady hafa aho avy eo .. Ary hoy ny tale fa ara-dalàna ny fifamalian'ny ankizy, io ny fizotry ny fitomboana. Eto. Ary amin'ny ankapobeny, afaka mandeha any amin'izay tianao ianao, raha tsy mifanaraka aminao ny sekolinay dia mandehana amin'izay tianao.
Avy eo dia nifandray tamin'ny kaonsily rosiana tao Bonn aho, nipetraka tany Cologne izahay, nampiditra ny zanako tao amin'ny sekoly rosiana iray ny konsulat, nifindra avy tany Cologne izahay ka nankany Bonn, nampanantena anay ny Alemanina nandritra ny fotoana nifanarahanay fa hanaiky olana amin'ity sekoly ity izahay, ary aorian'ny fifindra-monina , izany hoe fandrika toy izany tamin'izy ireo, ary taorian'ny nandehanany dia nandà anay izy ireo, ary nandrara anay tsy hanatrika an'ity sekoly rosiana ity.
Izy io, raha ny fomba fijerin'izy ireo, dia tsy mahafeno ny fenitra fanabeazana alemanina. Eny, eny, tsy mampianatra ny ankizy hanapaka ny hatoka izy ireo, ny lohany, ny mandondona ny masony tsirairay avy ary ny tapa-kazo. Noho izany dia tsy mifanaraka amin'ny fenitra fanabeazana alemanina sy ny zava-misy alemanina ankehitriny izy io. Mipetraka any an-tanàna, mamorona andian-jiolahim-boto, miady, mandositra, mandaka, manily antsy, hazo sns. Izany hoe, ny valinteniko dia milaza fa ny sekoly alemanina dia tokony hampianatra ny zava-misy amin'ny fiainana miaraka amin'ny ankizy ao amin'ny fiarahamonina alemanina. Raha ny marina, mampianatra izy ireo ary nipoitra avy hatrany ny fanontaniana momba io zavatra io ihany, misy sekoly arabo iray any Bonn, izay vatsian'ny Libya, ary mitovy ny toe-pahaizany amin'ny sekoly rosiana, izany hoe, tsy mifanaraka amin'ny fenitra fanabeazana alemanina ihany koa.
Fa ny zaza alemà, arabo ary rosiana dia afaka mandeha any, izany hoe afaka mianatra any amin'ny sekoly arabo ny ankizy, fa ny ankizy kosa tsy mahazo mankany amin'ny sekoly rosiana. Nahita Nazia iray aho tamin'io. Nahita fanavakavahana aho tamin'io. Notantaraiko ny momba io Nazisma io, nametraka fitoriana izahay mba hamelana ilay zaza hanatrika izany sekoly rosiana izany, nolavin'ny fitsarana mpitsara alemanina 5 izahay. Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia nilaza fa tao amin'ny sekolinay tao Cologne dia nisy zaza nokendaina 3, tsy maty akory, fa nokendaina tsara. Ary ny zaza dia mahatadidy izany rehetra izany, avy eo tadidiny fa nisy daroka, nisy daroka nandritra ny herintaona ary tsy nanao na inona na inona momba izany ny tale.
Voasoratra toy izao ny zon'ny fitsarana. Ary tao amin'ny didim-pitsarana dia voasoratra fa tsy manan-jo hisalasala ny amin'ny rafi-pampianarana alemanina aho, izany hoe, ny tranga rehetra tany an-tsekoly nandritra ny taona dia tranga mitokana, raha tao amin'ny sekoly iray ihany izahay dia tao Cologne ary taorian'izay dia nifindra tany Bonn, ny olana amin'ny sekoly Cologne dia voavaha tanteraka ho antsika izao. Izany hoe, efa lasa nankany amin'ny tanàna hafa isika izao, misy tanàna maro any Alemana, afaka mifindra toerana amin'ny toerana rehetra ianao amin'ny ankapobeny.
Ny toerana vaovao tsirairay dia hiteny fa voavaha ny olana. Ary tany Bonn, rehefa niresaka tamin'ny ray aman-dreniko aho, rehefa nisoratra anarana tao izahay rehefa nifindra, fa talohan'ny nandehanako tany am-pianarana dia fialantsasatra fahavaratra io, nanontaniako ny ray aman-dreniko tao Bonn, fa inona ny hevitrao momba ny sekoly Bonn? Nilaza izy ireo, 5 taona lasa izay, talohan'ny mpitsoa-ponenana, talohan'ny onjan'ny mpitsoa-ponenana, dia nisy sekoly tsara sy ratsy. Ary izao dia ratsy daholo ny sekoly, satria any an-tsekoly rehetra dia misy daroka, olana, ary izany rehetra izany dia hatramin'ny sekoly fanabeazana fototra, ny naoty 4 voalohany. Manomboka amin'ny kilasy fahadimy dia mankany amin'ny gymnasium, any amin'ny sekoly tsotra izy ireo, ary amin'ny gymnasium dia tsara izany, saingy ratsy ihany koa ankehitriny, satria ny baiko ara-politika dia milaza fa hitondra mpitsoa-ponenana mankany amin'ny gymnasium, na inona na inona naoty, na inona na inona fahalalana, izany hoe efa nitondra grenady izy ireo , eo izy ireo efa mitondra antsy, eo no nitranga ny mpiasa iray nilaza tamiko fa ny zanany lahy nihinana tao amin'ny gymnasium, nanatona azy ny Arabo, hono, mihainoa, ary inona no nohaninao? Manana Ramadany izahay, tsy manan-jo ianao. Ka tsy Silamo aho, ary nanomboka ady ry zareo. Izany hoe, takatrao, nihazakazaka nanatona azy izy ireo, nanomboka namaly izy, izany hoe kolontsaina io, rehefa milalao vato amin'ny hazo ny ankizy dia entin'izy ireo any an-jaridaina sy any an-tsekoly, ary mino ny Alemanina fa tokony ho tian'ireo ankizy hafa ireo ankizy ireo. avy eo ampidiro, ampianaro indray ... Inona no azo ianarana indray hampidirina? Maninona no tonga mianatra ny zanako lahy, misy ny ampahatelon'ny Arabo, ampahatelon'ny Syriana, ampahatelon'ny Afghans, Alemanina roa, zaza Rosiana iray. Karazana kolontsaina inona no hoentin'ny zanako avy amin'ny kilasy toy izany? Entiny mody eto (fihetsika manapaka ny tendany) ary nilaza izy fa ho faty i dada. Nianatra izay nianarany tany am-pianarana izy ary nitondra izany.
Fanontaniana voajanahary ity, misy loko matevina ve eto? Satria misy tranga mitoka-monina, dia misy ny fironana, ary misy tranga marobe.
Fa mba hahafantarana raha misy loko matevina dia mila mijery ny gazety alemà fotsiny isika. Ny gazety alemanina dia miantso ny tranga tsirairay mitokana, fa ohatra, teto Cologne izahay, manana antontan-taratasy izahay, tompon'andraikitra, ao amin'ny sekolinay dia misy zaza telo kendaina. Manana antontan-taratasy hafa izahay, avy amin'ny departemantan'ny fampianarana any an-tanàna, fa any Cologne dia zaza marary 2,200 izay tsy mifanaraka amin'ny sekolim-panjakana mahazatra no voatery mianatra sy mianatra any, satria toerana manokana. sekoly ho azy ireo tsy. Izany hoe, mikapoka ankizy hafa ireo ankizy ireo mandritra ny lesona, manelingelina ny kilasy, saingy tsy misy toerana, ka mandefitra izahay. Ary hitanao fa, 2200 dia isan-taona. Isan-taona dia tonga ireo vaovao, miala ireo vaovao. Ary any Cologne dia manodidina ny 100 ny sekoly fanabeazana fototra. Izahay dia mizara ankizy 2 200 ho sekoly 100, mahazo zaza 22 eo ho eo isaky ny sekoly izahay ary 8-10 eo ho eo isaky ny sekoly ambaratonga voalohany. Hitanay fa misy zaza roa eo ho eo isan-kilasy. Tena mahasoa izany ho an'ny sekoly, ho an'ny ankizy iray na roa ao am-pianarana dia omena tambin-karama fanampiny ho an'ny mpampianatra izy ireo, izany hoe, avy eo dia mifampiraharaha amin'ireo ankizy roa ireo izy, ny ambiny rehetra dia maheno azy.
Izay ihany. Ity dia antontan-taratasy. Okay, maka ohatra amin'ny Sekolin'i Berlin izahay. Misy kilasy any amin'ny sekoly Berlin izay tsy misy na dia mpianatra iray aza miteny teny iray amin'ny teny alemà. Ity no renivohitra ary ny mpampianatra mihitsy no manoratra momba an'io, manome boky momba ny loza mahatsiravina izy ireo izao any Alemana, satria efa nahazo izany taloha, tamin'izay no nifindra ny Alemanina Kazakh tamin'ny taona sivifolo, ohatra, vondron'olona Alemanina, Kazakh Alemanina nifindra tany Alemana, niparitaka izy ireo namakivaky ireo tanàna, nankany amin'ny sekoly eo an-toerana izy ireo ary manodidina ny 25 amin'ny 30 ny mpianatra misy Alemanina. Ary indray, ity dia Alemanina Rosiana, Alemanina Kazakh Rosiana, izany hoe dimy mifanohitra amin'ny 25, ary 25 no mampianatra ny fiteny, ny kolontsaina eo an-toerana, ny fomba amam-panao eo an-toerana. Raha ny Alemanina Kazakh anay, tsy nisy kolontsaina izy ireo, any Alemana fotsiny dia misy fitsipika hafa tsy azonao atao ny mitsidika azy fotsiny, tsy maintsy manaiky ianao 3 volana mialoha, enim-bolana mialoha, miantso hanaiky.
Any Alemana dia tsy mitovy ny fiheverana ny ray aman-dreny. Ry ray aman-dreny, ny zava-misy fa miaina ao amin'ny trano fitaizana be antitra ny ray aman-dreny ary maty any dia ara-dalàna tanteraka ho an'i Alemana.
Nilaza ianao fa ny fehezan-teny momba ny zaza nokendaina telo tany am-pianarana dia toa nampihoron-koditra tokoa. Azoko tsara fa ady amin'ny ankizy no resahintsika fa tsy resaka famonoana olona?
Tsy nisy ny tolona, nisy ny fanafihana mivantana avy amin'ity Afgana ity, satria nandaka tany am-piandohana izy rehefa nankany am-pianarana. Mandaka, avy eo ampianaro izy na nisy nampianatra azy. Fanontaniana ho an'ny polisy izany, saingy tsy nisy nahalala. Nampianarina izy handray ny vozona, fihazonana matihanina, nokapohina arak'asa, tena nokapohina teo an-tampon-doha, nokapohina tamin'ny lohany, teo amin'ny vatany ambony. Ary zaza telo ... Izany hoe nokendainy izy ireo, nokendainy ny zaza telo ary notendreny izy ireo ka najanona aza ny fampianarana. Ao amin'ilay antontan-taratasy dia, nanoratra ny tale hoe: "Nijanona kilasy aho, ity zaza ity dia toa kilasy iray, nangataka ny hankanesan'ny ray aman-dreny hody."
Ny talen'ny sekoly, ny fitantanana ny sekoly dia tokony hanana andraikitra sasantsasany amin'ny fitaizana ny zaza sy ny fiarovana ny ankizy amin'ity indray mitoraka ity. Faharoa, Alemana dia tsy maintsy manana lalàna mifehy, ny lalàm-pireneny manokana ary miampy ny Fifanarahana UN momba ny zon'ny zaza, ny Fifanarahana UN momba ny zon'olombelona. Alemana dia tokony hanaraka. Moa ve tsy tsikaritra daholo izany?
Lilia, ny mifanohitra amin'izany dia ny Convention on the rights of the Child dia tafiditra amin'ny ankapobeny amin'ny lalàna alemanina. Izy io dia ampahany amin'ny lalàna alemanina nandritra ny telopolo taona, izany hoe, ny valin'ny Vaomiera Eoropeana, voasoratra izany, miahiahy aho, avy amin'ny fitantanan-paritra nipetrahako, teo no nanoratany ilay lahatsoratra, nandefa izany tany amin'ny Vaomiera eropeana, ny Komisiona eropeana dia nanao sonia azy ary nandefa izany tamiko. Izany hoe, ny kajy dia, handefa olona any amin'ilay olona isika, ny Vaomiera eropeana, voasoratra eo amin'ny taratasy ny fahefana lehibe, hisasa amin'ny valiny izy ary hanadino, toy ny nofy ratsy, ny zava-nitranga rehetra.
Ary amin'ny ankapobeny sy ny zava-drehetra, raha ny tokony ho izy, dia tsy miraharaha azy. Satria raha mijery ny lalàna isika, ary ny lalàna manangana ny Vondrona eropeana ihany. Raha mijery ny Fifanarahana momba ny zon'ny zaza isika, dia tafiditra tao hatramin'ny taona fahasivy ambin'ny folo tamin'ny lalàna alemanina, nampihatra izany ho azy i Alemana, miampy ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava. Ny lalàna mifehy ny heloka bevava dia mandrara ny famelezana zaza fa tsy ny zaza irery. Ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava koa dia mametraka ny andraikitry ny talen'ny sekoly, amin'ny mpiasan'ny sekoly amin'ny fisorohana ny herisetra, toy ny trano famoahana olona nampijaliana, fampijaliana ny olona ambany, raha nokapohina nandritra ny herintaona, izany dia fampijalian'ny olona ambany.
Rehefa nametraka fitoriana nitovy tamin'ny polisy tamin'ny talen'ny fahavaratra lasa teo aho dia nilaza tamiko ilay polisy hoe: “zazalahy, aleo ianao miala eto, miala eto fotsiny. Mametraka fangatahana iray fotsiny ianao izao, hilamina ny zava-drehetra amin'ny taratasiny, fa higadra ianao, hosazina ianao. " 4 volana ny famotorana, antontan-taratasy izay nokendaina ny ankizy tany an-tsekoly, antontan-taratasy nivoaka maina ilay tale. Nakaton'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ny raharaha nanenjehana azy, satria nijery nandritra ny herintaona ny talen'ny talen-tsekoly ary nanantena izy fa ho voavaha irery ny zava-drehetra, ary nosokafan'izy ireo ny raharaha nanamelohana ahy ny talen-tsekoly fa nahatezitra azy aho tamin'io, noho ny fiahiahako ho tsy mahay. Ary miampy fanamelohana diso. Izany hoe, satria tsy voasazy izy ...
Azoko tsara ve fa nisy fanontaniana momba ny fanesorana ny zanakao lahy enin-taona tsy ho ao amin'ny fianakaviana?
Rehefa manana isika. Nahazo fandrarana tsy hiditra amin'ny sekoly rosiana iray eo ambanin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana izahay, ary tsy nety nandeha tany amin'ny sekoly alemanina ilay zaza satria tsy mianatra na inona na inona any izahay fa any ihany no miady. Any Alemana, misy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, folo taona lasa izay, izay mamaritra izay hatao amin'ireo ray aman-dreny toa antsika. Voasoratra eny ny onitra, soratana aloha ny lamandy, avy eo nesorina tao amin'ny fianakaviana ilay zaza. Rehetra. Any, raha tsy mandeha mianatra ny zaza dia mihevitra ny Alemanina ho sekoly alemanina, heverinay fa sekoly ny sekoly iray, dia nesorina ilay zaza. Nanapa-kevitra izahay fa tsy hanao an'izany ary tsy hiandry an'io fotoana io, rehefa nipaoka ny varavarana tamin'ny alina izy ireo. Satria nahalala tranga maro toy izany izahay, nahita sy nandre zavatra betsaka, vao tamin'ny 6, tamin'ny 5 maraina dia polisy 20 no nandaka ny varavarana ary avy eo dia nosokafana ny tranga iray izay mbola notoherinao ihany. Ary izay ihany. Nentinay mivady ny zanakay.
Nikolay, nilaza taminay fotsiny ianao ny fomba tsy hanaovana izany. Niresaka momba ny tsy fandanjana amin'ny fampiharana ny hevitra marina momba ny fiarovana ny zaza ianao. Na izany aza, voalazanao fa misy ny toe-javatra mila manavotra ny zaza amin'ny ray aman-dreniny, mbola ilaina ve ny polisy tsy ampy taona?
Mino aho fa ... Hitanareo, raha nitondra maimaim-poana ny ankizy ny fianakaviana nitaiza, izany hoe, raha tsy nisy famatsiam-bola avy amin'ny governemanta, dia fantatrareo fa misy ny olona manana fo manoloana izany. Raha avela ny fahafaha-manao dia misy firenena izay tsy misy trano fitaizana zaza kamboty mihitsy. Ara-bakiteny ho an'ny ankizy tsirairay, tsy fananana no lovaina ao, fa ho an'ny ankizy tsirairay dia voasoratra izany, lisitra mivantana no namboarina, raha sendra misy zavatra mitranga amin'ireo ray aman-dreny, izay hiaraka amin'ilay zaza. Raha misy zavatra mitranga amin'ity olona ity, iza no hiaraka amin'ilay zaza. Izany hoe, ambaratongam-pahefana iray fotsiny. Hita fa raha misy ny olana dia tsy tokony ho raharaha fandraharahana ity zaza ity.
Any Failandy, ohatra, ny ankizy, na dia nafindra any amin'ny fianakaviana nitaiza aza izy ireo, raha ny fahalalako azy dia tsy esorina amin'ny zon'ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny.
Eny, fa potika ara-bola ny fianakaviana, ary tsy afaka miady ho an'ilay zaza ny fianakaviana. Raha mahazo vola 100 000 Euros isaky ny zaza isan-taona ny fianakaviana iray, ary maty fatratra ho azy, dia tsy afaka miady ho an'ny zanany mihitsy ilay fianakaviana. Izany no tiako holazaina. Tany Alemana dia nisy volana maromaro lasa izay, nisy tranga tsy fantatra rehefa nokapohina ny zazakely iray, nokapohina ny zaza iray, ary talohan'izay nandritra ny roa na telo volana dia trano iray misy rihana ny trano iray manontolo nitrangan'ireto daroka ireto, ary misy rihana dimy. Ireo mpifanila vodirindrina amin'ilay trano iray manontolo dia niantso polisy foana, nitodika tany amin'ny fitsarana tanora, nitodika tany amin'ny manampahefana mpiambina ... Tsy nanao na inona na inona izy ireo. Ary nipoitra ny fanontaniana hoe maninona ianao no tsy nanao na inona na inona tamin'ity toe-javatra ity, ary maninona ny toe-javatra, raha izany, amin'ny toe-javatra misy anay, miaraka amin'ny zaza iray izay tsy mety mandeha any an-tsekoly noho ny daroka, nahoana ianao no manafika fianakaviana iray toy izany, ary manafika ny fianakaviana toy izany.
Azonao valiana ve ny fanontaniana farany? Mila fahamarinana momba ny zaza tsy ampy taona ve ianao?
Eny, tsy amin'ny endrika izy io fa any Alemana, ary tsy amin'ny endrika hampiharana azy amin'ny firenenao. Ity i Lily, fotoana iray, fotoana kely iray, nefa tena zava-dehibe. Raha izao, raha nesorina tamin'ny fianakavianao ny zanakao, dia afaka miakatra amin'ny fitsarana ny fianakaviana, mametraka fitoriana noho ny asan'ny mpiambina ary mitory amin'ny maha-mpiambina azy, fa mitory kosa amin'ny maha-mpiambina azy any amin'ny fitsarana. Hijery ny antontan-taratasy ny mpitsara, eto ny antontan-taratasy, ireto ny toetra, eto ny ray aman-dreny, hiatrika izany izy. Raha manana fitsipika 24 ora ianao dia ho toy izao. Nentina ny zaza, natolotra ny fitsarana ny antonta-taratasy, natolotra ny fitsarana. Any amin'ny fitsarana dia hisy fonosana toy izany eo noho eo, tonga ny mpitsara mandry, mila mamaky azy izy ary mandinika azy rehetra ao anatin'ny 24 ora. Hosoniaviny izany rehetra izany, hatrany ambony ka hatrany ambany, ny fonosana rehetra, ny tranga rehetra, ary avy eo ianao dia efa hanao fanamby amin'ny fihetsik'ity mpitsara ity any amin'ny fitsarana ambony.
Fa ny fanapaha-keviny. Fantatrao ny fomba fiasan'ny rafitra. Na aiza na aiza firenena, miasa ny rafitra ka tsy dia manongana na manova ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny fitsarana ambony. Tsy miankina amin'ny firenena izany. Avy hatrany, ny rohy izay nifehy ny fiambenana dia nanjavona, tsy misy intsony. Ary inona koa no vita tany Alemana. Any Alemana, ny fitsarana dia mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny hevitry ny manam-pahaizana, manoratra ny manam-pahaizana raha halaina ilay zaza na tsia, ary omen'ny fitsarana 20 000 euro ilay manam-pahaizana amin'izany. Fa ny manam-pahaizana dia mahazo ny baiko mivantana avy amin'ny Jugendamt, noho izany dia manoratra izay tadiavin'ny Jugendamt ilay manam-pahaizana. Raha tsy manoratra izay tadiavin'ny Jugendamt ilay manampahaizana, dia inona no tadiavin'ny fitazonana azy, dia tsy hahazo baiko bebe kokoa amin'ity Jugendamt ity ny manam-pahaizana. Hita fa toa manam-pahaizana manokana, Jugendamt, mpitsara ny tranga tsy miankina, saingy miasa anaty rojo izy rehetra ary miasa daholo, miampy trano fitaizana zaza kamboty. Saingy miasa ao anatin'ity fonosana iray ity izy ireo, ekipa iray, manasa tanana.
Manoratra araka ny tadiavin'ny Jugendamt ilay manam-pahaizana, hoy ny mpitsara, fa tsy manam-pahaizana aho, eto manana ny hevitry ny manam-pahaizana aho, ekeny ilay manam-pahaizana, manakarama ny manam-pahaizana manokana ny ray aman-dreny, mandoa vola 20 000 euro ny tenany, ary hoy ny mpitsara fa tsy matoky ny manam-pahaizanao aho. Ka ahoana raha voamarina izy. Ary tsy matoky azy fotsiny aho. Ary ny toetra mampiavaka anao, ny fijoroana ho vavolombelona, ny mpifanila vodirindrina aminao, aza mitana andraikitra velively.
Tonga. Hitanao fa misy olona mandositra an'i Alemana miaraka amin'ny zanany hankany Frantsa, mankany Amerika, mangataka satan'ny mpitsoa-ponenana any Amerika. Tena mihazakazaka miampita ny olona, ary raha vantany vao miteny ny zanakao any amin'ny zaridaina na any am-pianarana fa nanapa-kevitra ny handao an'i Frantsa i Neny sy ny dadany, ary Alemanina ny fianakaviana dia nanapa-kevitra avy hatrany ny Jugendamt fa esorina amin'ny ray aman-dreny ny zony hamaritana ny toerana onenan'ilay zaza. Afaka mandeha irery ianao, ary ny zanakao dia hijanona any Alemana, ilay zaza any Alemana ho zavatra iray, an'ny fanjakana. Izany no olana, Lilia. Izany hoe tsy mihazakazaka eo no ho eo ny olona, manana karazana fifandirana izy ireo, manomboka mitombo izany, ary rehefa manapa-kevitra ny hitsoaka izy ireo dia manomboka manangona entana, hitan'ilay zaza ary hoy izy, fa inona no ataontsika? Ary handeha ho any Frantsa izahay. Firenena eropeana, tsy Afrika io, sa tsy izany? Toa tsy mihinana olona sy ankizy any ry zareo, fa nifindra avy tany Alemana ho any amin'ny sisintany - France sahady. Tsia, tsy hiala ianao. Azonao atao ny mamela ny tenanao, ary avelao eto ny ankizy.
Ary avy eo dia halefa any ny faktioranao, ary raha hiaraka amin'ilay zaza ianao, ary nanapa-kevitra ny Jugendamt fa nesorina ny zonao hamaritra ny toerana onenan'ilay zaza, dia hanantona anao ny polisy alemà fa tsy ny frantsay. Alemà. Mandondona eo am-baravaranao izy, manoratra ny zanakao any Frantsa ianao, ary avy hatrany dia ho any Alemana ilay toerana misy ny zanakao. Ho avy any aminao ny polisy alemà, hiantso polisy frantsay ianao, ny zanako halaina, ny polisy frantsay tsy ho avy hiaro anao.
Ny zanakao dia hoentin'ny polisy alemana ary hoentina any Alemana. Ary misy tranga toy izany, ary misy tranga maro toy izany. Noho izany, rehefa raisina ny lalàna dia ilaina ny mijery tsara, fa tsy ireo fonosana vatomamy, manao ahoana ity lalàna ity, fa inona no tena hitranga aorian'izany. Ary eto ny zava-misy.
Nahavita nandao an'i Alemana niaraka tamin'ny fianakavianao ve ianao sa nahavita? Mipetraka any Moskoa ve ianao izao?
Lily, te hiteny an'io aho. Hoy ny olona, miampanga ahy amin'ny Internet, sendra tafahoatra i Ernay, manao izay manjombona. Ny amerikana dia manoratra fanangonan-tsonia any amin'ny kaongresy amerikana, vonjeo ny zanatsika amerikana amin'ny Alemanina. Ny frantsay dia manoratra fanangonan-tsonia any amin'ny Parlemanta eropeana, ary misy, efa nisy ny fizotran'ity raharaha ity, vonjeo ny zanatsika frantsay amin'ny Alemanina. Ny Italiana dia manoratra fanangonan-tsonia mba hamonjy ny zanatsika italiana amin'ny Alemanina. Ary afaka milaza marimarina aho fa tena faly tokoa izahay fa afaka namoaka ny ankizy toy izao, talohan'ny nokapohinay. Raha tsy namoaka azy ireo izahay tamin'ny volana aogositra tamin'ny taon-dasa, avy eo, na dia nandritra ny fizotry ny fitsarana tamin'ny volana oktobra-novambra aza, dia nipaoka ny varavarana tamin'ny 5 ora alina fotsiny izahay ary polisy 25 teo ho eo no niditra an-tsokosoko, ento ny ankizy, avy hatrany dia manoratra tranga heloka bevava ianao nidaroka polisy 25 ianao, misy tranga toa izany koa. Nanoratra fanambarana teo ireo polisy polisy be fikomiana, fa nokapohinao izy rehetra, mba hihatsara ny fiainanao aorian'izany, tsy ho hitako intsony ny zanako sy ny vadiko zanakay amin'ny fiainana. Izany hoe hanova ny anarany fotsiny izy ireo, hanova ny anarany, hanova ny adiresiny, tsy ho hitantsika intsony izy ireo. Nampandrenesina fotsiny izahay fa izany no izy. Olona efa niaina izany. Ary ankehitriny ny mpisolovava alemà rehetra ampifandraisiko, ny zavatra voalohany lazain'izy ireo dia hoe: nesorinao ireo ankizy ireo? Eny hoy aho, tsara ho ahy ireo. Ity no zavatra marina indrindra nataonao tamin'ity toe-javatra ity.